Naa = More | Martech Zone
Achọrọ m ịgbasochi nke m Meghee = Uto biputere nwa oge. Edere na post ahụ bụ ohere nke ihe ịga nke ọma mgbe ndị folks na-etinye uche na otu esi agwakọta azịza ha na azịza ndị ọzọ. E nwere ihe ntụgharị n'akụkụ na nke a, nke ahụ bụ maka ụlọ ọrụ iji belata arụmọrụ nke ngwọta ha ruo isi nke etu esi eji ha. Gbakwunye plethora nke ngwaahịa, ọrụ, na atụmatụ nwere ike ịdị egwu.
Ndị mmemme kpọrọ ya 'ọkpụkpụ'.
'Creep' bụ ihe nro nke ndị mmepe ọ bụla. Ọ na - eme ma ọ bụrụ na akwadoghị atụmatụ mmepe siri ike wee rube isi. Atụmatụ na-aga n'ihu na-abanye n'ime tutu oru ngo a enweghi ike ichota ya na o gaghi emecha. Ma ọ bụ nke ka njọ, ọ na-agwụ agwụ ma nwee ọtụtụ chinchi.
Aga m ekwenye na ụlọ ọrụ, na ngwaahịa na ọrụ ha nwekwara ike ịta ahụhụ site na 'ọkpụkpụ'. Site na ịmachighị ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa na ọrụ nke azụmahịa gị, ị ga-amalite ịchụ egwurugwu, na-eche na enwere ego ga-enwe ebe a ma ọ bụ ebe ahụ. Agbanyeghị, ị na-eleghara mmebi anya na azụmaahịa gị, elekwasị anya na ndị ọrụ gị yana ihe ọmụma, yana nsogbu ọzọ ọ na-etinye na nrụpụta, nkwado, nnyefe, wdg.
Mgbe ọ bụla ị kpebiri ilele ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ, lee ma ọ bụrụ na enwere ụlọ ọrụ ebe ahụ nke na-enye ya dị ka akụkụ nke azụmahịa ha. Nwere ike ime ya karịa ha? Yourlọ ọrụ gị ọ nwere ike ịkwado nke ahụ ma gaa n'ihu ịkwado nka na isi gị? Ndị ọrụ gị ọ ga-achọ ịkwado ya?
N’ikpeazụ, ịchụ egwurugwu nwere ike gbajie gị.
Tags: mmepe ngwaọkpụkpụatụmatụ creepatụmatụMpekarịmfe